Adeegyada Duulista Office | RayHaber | raillynews
HomeGUUDAdeegyada Gaadiidka Xafiiska
23 / 05 / 2020 GUUD, Warqad Hordhac ah
Gaadiidka xafiiska Markay noqoto howlaha, waxaan dhihi karnaa koox shirkad gaadiid ayaa arintaan u weeciyay iyagoo bixiya adeegan. Caan-ka-dhigga, oo lagu gaadhay adkeynta adeegyada gaadiidka guryo-ka-guri, ayaa hadda ku faafay aagga gaadiidka xafiiska. Shirkadaha gaadiidku maanta waxay bilaabeen inay u adeegaan shirkadaha shirkadaha ee hawshan.
Marka sidee ayuu u socdaa howlaha guuritaanka ee xafiiska?
Sida adeeg kasta gaadiidka xafiiska Waxaa sidoo kale jira howlo adeegyadooda ah. Sidoo kale waa nidaam la mid ah gaadiidka guriga. Si kastaba ha noqotee, hanaankan waa wax yar oo dhameystiran oo sidii shirkadaha gaadiidka, waa inaan wax ka qabanaa hay'ad, ee ma ahan qof. Marka la eego, qeybaha wax soo iibsiga iyo maamulka ee shirkaduhu waxay u dhaqmaan iyaga oo matalaya shirkadda. Annaga oo ah reer Çolakoğulları, waxaan mar walba ku dadaalnaa sidii aan u siin lahayn adeegyo gaadiid oo tayo leh macaamiisheenna.
Gaadiidka Çolakoğulları, oo ka mid ah shirkadaha gaadiidka ugu da'da weyn ee gala qaybta waaxda gaadiidka; had iyo jeer waxay ku siinayaan adeeg tayo, ammaan ah si dhakhso leh. Shirkadaha shirkaduhu waxay ku yaalliin qaybo badan oo ka mid ah dalka Turkiga, gaar ahaan qodobka aan kor ku soo xusnay ee ku saabsan astaantan 3 si loo doorto shirkadeena ayaa qayb weyn ka ah.
Adeegyada Gaadiidka Xafiiska Khabiirka
Sida shirkadda gaadiidka Çolakoğulları; gaadiidka xafiiska Waxaan had iyo jeer u fidinaa kooxda ugu fiican, qalabka ugufiican iyo dhammaan qalabkayaga macaamiisha macaamiishooda howlahooda. Waxaan si taxadar leh uga shaqeyneynaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan, adeegyada khubarada. Sababta ugu weyn ee aan ugu nugul nahay mowduucan waa; ma aha inay sababaan wax la yaab leh ama dib-u-dhac ku yimaadda howlaha gaadiidka ee xafiiska. Faa'iidada ugu weyn ee shirkadeena ay u leedahay barta doorashada; Waa khibrad. Sidaas darteed, kooxda arrimaha maamulka ee shirkaduhu si joogto ah uma qabtaan adeegyada wareejinta xafiiska. Sidaa darteed, laga bilaabo shirkadaha gaadiidka ee yaqaan ganacsiga; Qorshee oo jadwalka ku go’aamiya arrimaha aan u horseedi doonin wax dhib ah inta lagu gudajiro howlaha gaadiidka xafiiska
Shirkad hogaan ah oo ka shaqeysa Shirkadaha Guurista
Shirkadeena waa shirkadda gaadiidleyda sida aadka ah loo doorbidayo uguna kalsoonida badan ee dhexmara dhammaan shirkadaha gaadiidleyda xafiisyada. Laga soo bilaabo 1970 waxay ogaatay wadashaqayn badan oo lala yeesho shirkadaha ku baahsan dalka Turkiga. Si aad u hesho tixraacyada shirkadeena iyo taariikhda shirkaddayada https://www.ofistasimaciligi.com.tr waxaad gali kartaa cinwaankayaga. Macluumaad faahfaahsan ayaa lagu soo daray.
Akçagöze - Başpınar Adeegyada kormeerka kala duwan ee Adeegyada Kormeerka Ugaarsiga…
Engineer Xarun Farsamo
Ogeysiiska Shaqada: Shaqaalaha Farsamada Shaqaalaha Farsamada waa in la shaqaaleysiiyaa (loo qoondeeyo mashruuca Marmaray)
Ogeysiiska Qandaraaska: Kontarooliyaha Xafiiska waa la iibsan doonaa
Gaadiidka duullimaadka iyo macaamiishu waxay ku yaalaan Umraniye
Codsiga UTIKAD ee ah in la Joojiyo Kirada Xafiisyada Madaarada Loo Diiday